1. Inona no ilaina amin'ny fanaova mofo Manome refy loko tsara tarehy Plus ampio mamy amin'ny tsiro tonga lafatra Siramamy avo Fa mino an'izany ve ianao Ahoana ny fomba fanamboarana ranomandry, iza no nieritreritra fa mora be izany, ary afaka naka mora foana ireo fitaovana rehetra an-tranonao ao an-dakozia ianao, ampiasao izy ireo hamafazana tsara ny pastry anao ary hampirehareha azy ireo. Tena dingana vita an-trano io. Ny fitsapana ny fahasambarana na izay mitady fidiram-bola fanampiny amin'ny fanaovana mofo. Andao ataontsika izany mba hampihena ny vidiny miaraka amin'izay.
2. Inona no atao hoe siramamy mangatsiaka? Tena siramamy nolalovan'ny fikosoham-bary tsara. Ny bika aman'endriny dia vovoka fotsy Ahitana vovo-katsaka manodidina ny 3% ary ampiasaina ho enti-miasa amin'ny fampitomboana ireo entana voaendy. Ny mari-drano dia tsara raha tsy misy tombo-kase sisa tavela. Izy io koa dia fitambarana crème handravahana mofomamy, donut ary hanaovana saribakoly handravahana tsara ny tsindrin-tsakafo. Ny tena zava-dehibe dia mora ny manao samirery, manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny fividianana akora. Mora hita, mora atao amin'ireto fitaovana manaraka ireto:
3. Tsy misy afa-tsy singa 3 azo hita isaky ny trano amin'ny fanaovana siramamy mangatsiaka: siramamy 150 grama.
4. Isaky ny 11 grama ny katsaka sy ny blender
5. Manomboka amin'ny siramamy. Araraka ao anaty blender Ary avy eo mihodina tsara Amin'ny fampiasana fotoana mihodinkodina, tsy lava, 20-30 segondra eo ho eo
6. • Avy eo zahao raha tsara na tsia ilay siramamy mifangaro. Raha mbola misy takelaka dia ahodino indray. Mandra-pahatongan'ny fotoana mety dia toa vovoka kely izy. • Rehefa mifangaro tsara ny siramamy. Aorian'izay dia ampio ny vovo-katsaka ao amin'ireo faritra voalaza etsy ambony. • Avy eo mifangaro ny siramamy sy ny vatan-katsaka. Afangaro mandritra ny 10 segondra ireo zavatra roa ireo.
7. • Hamarino raha mifangaro tsara amin'ny vovo-tànana tsara ireo akora ao anatiny. Vita izany. Avy eo tehirizina anaty fitoeran-drano mihidy. Mora ampiasaina
8. Ampiana mamy sy hafanana avy amin'ny gilasy an-trano. Satria ireo tia sakafo dia mitandrina ny fisafidianana akora tsara Raha afaka mamokatra akora manta isika Na mihinana amin'ny sakafo efa nataonay tao an-trano Ho fanampin'ny fananana tsiro tsy manam-paharoa Fantaro ny niaviany Manampy amin'ny fampihenana ny vidiny koa izy io satria zavatra mety ho hita manodidina an'io fety fanaovana mofo io. Andao hanao siramamy mangatsiaka Handravaka mofomamy na mofomamy ny tenany Avelao ny olona mihinana hahalala ny mamy izay iresahantsika hanao izany Afenina ihany koa amin'ny fitiavana, fikarakarana ary hafanana Amin'ny molekiola tsirairay amin'ny vatomamy izay voaravaka tsara ireo akanjo Na ny fanasana ny ankizy hanao saribakoly sy hanamboatra mofomamy dia hetsika rehetra mamorona fahatsiarovana. Ary mitsiky ihany koa ho an'ny fianakaviana Mihoatra noho ny mamy misy tsiro